Amazon Dash သည်စပိန်သို့အလွယ်တကူအလွယ်တကူ ၀ ယ်နိုင်သည် Gadget သတင်း
Amazon Dash သည်စပိန်သို့အလျင်အမြန်အလွယ်တကူ ၀ ယ်နိုင်သည်
အသုံးပြုသူအမြောက်အများသည်အွန်လိုင်းတွင်ပစ္စည်းများစွာကို ၀ ယ်ရန်ရွေးချယ်သည့်အခါတိုင်း၊ အိမ်မှထွက်ခွာစရာမလိုဘဲဆိုဖာမှပြောင်းစရာမလိုဘဲအွန်လိုင်းတွင်ပစ္စည်းများစွာ ၀ ယ်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ အပြစ်ပုံ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယခုအရာ, အမေဇုံအပေါ်ဖြစ်ပါတယ် ၏စပိန်အတွက်ဆိုက်ရောက်ကြေညာခဲ့သည် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။အချို့သောစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောကိရိယာများသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အချိန်အတော်ကြာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လည်ပတ်နေပြီးထုတ်ကုန်အချို့ကိုလျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူ ၀ ယ်ယူနိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးသည်။
Amazon Dash ဟူသောဝေါဟာရသည်လုံး ၀ မတူပါကဤဆောင်းပါး၌အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်သင့်အားကြိုးစားမည်ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်မပူပါနှင့်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်အိမ်ကိုဒီခလုတ်တွေနဲ့ဖြည့်နိုင်ပြီးနောက်စူပါမားကက်ကိုနောက်မှမဟုတ်ဘဲစောစောစီးစီးသွားနိုင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှာတာဝန်မရှိပါ။
1 Amazon Dash ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာတွေလဲ။
2 Amazon Dash ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ။
3 Amazon Dash သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်
Amazon Dash ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာတွေလဲ။
အမေဇုံကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့ချိန် မှစ၍ ၀ ယ်လိုအား၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်မဆို၊ ယခု Amazon Dash နှင့်အတူ Jeff Bezos မှဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီကိုပိုမိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်လိုသည့်အရာဖြစ်သည် ဤခလုတ်များထဲမှတစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုခလုတ်၏ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။.
ယခုစပိန်တွင်ဖြန့်ချိသောအမေဇုန်ထုတ်ကုန်သစ်သည်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်လိုအပ်သောအိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အိမ်သာသုံးစက္ကူ၊ ဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ပန်းကန်ဆေးစက်များမှာ Amazon Dash မှ ၀ ယ်ယူနိုင်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။
ခလုတ်တစ်ခုချင်းစီသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် Amazon Premium တွင်စာရင်းသွင်းရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
Amazon Dash ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ။
Amazon Dash ကိုသုံးရန်နည်းလမ်းမှာရိုးရှင်းပါသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့ခလုတ်တစ်ချက်ကိုဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၄.၉၉ ယူရိုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပထမဆုံး ၀ ယ်ယူသည်နှင့်ချက်ချင်းကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပြန်လာလိမ့်မည်။။ ၀ ယ်ယူသည့်ပစ္စည်း၏ငွေပေးချေမှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်မျိုးစလုံးပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်ရမည်။
Amazon တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းခလုတ်တစ်ခုစီသည်သီးခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော် virtual store application ကိုယ်တိုင်မှ၎င်းကို ၀ ယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ Ariel ခလုတ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူရုံသာမက Amazon Dash ကိုနှိပ်တိုင်းအကြိုက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ထုတ်ကုန်စာရင်းမှကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဤအမေဇုံခလုတ်အသစ်ကိုနှိပ်သောအခါသင်အမှားလုပ်မိလျှင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ Dash ကိုနှိပ်သည့်အခါတိုင်း Amazon application ကိုတပ်ဆင်ထားသည့်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်သင်သတိပေးချက်တစ်ခုရရှိလိမ့်မည်။ မည်သည့်ပြproblemနာမှမရှိဘဲအမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်.
Amazon Dash သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်
ငါတို့ပြီးသားလိုပဲ Amazon Dash ကိုယခုအခါစပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်သည်ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်မှဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီက၎င်းတို့သည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်ဟုထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုသော်လည်း၎င်းတို့ကိုဝယ်ယူရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုင်သို့သွားပြီးယူရို ၄.၉၉ သုံးရမည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီငွေပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကနေပထမဆုံး ၀ ယ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲပြန်ပေးမှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင် Amazon Dash ကိုလူသိအများဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၂၀ အတွက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ မကြာမီဒီကိန်းဂဏန်းသည်ကြီးထွားလာနိုင်သည်။
Amazon Dash သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ကျော်မျှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်သိန်းနှင့်ချီသောအမှာစာများပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ၃ မိနစ်တစ်ကြိမ်မှာဒီပစ္စည်းကိုမှာယူနိူင်သည်.
ငါတို့တိုင်းပြည်တွင်ဤခလုတ်ကိုမစမ်းသပ်ရသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရာကိုမြင်တွေ့ရပြီးနောက်၎င်းသည်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျနော့်အမြင်နှင့်ထုတ်ကုန်အချို့ကို ၀ ယ်ရန်အလွန်အဆင်ပြေမည်ဖြစ်သော်လည်းစူပါမားကက်သို့သွားရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပြီး၊ အချို့သောကမ်းလှမ်းမှုများကိုငွေစုသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ချန်ထားမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်မှရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်စံချိန်မမီမှီထုတ်ကုန်များကိုလက်ခံရရှိပါမည်။
Amazon Dash ဟာအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ထင်သလား၊ သူတို့တိုင်းပြည်မှာအောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်သလား။။ ဤထင်မြင်ချက်ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်နေရာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Amazon Dash သည်စပိန်သို့အလျင်အမြန်အလွယ်တကူ ၀ ယ်နိုင်သည်
Hyperloop One သည်အနာဂတ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းသစ်သို့လှမ်းလိုက်သည်
စပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းပြီးဖြစ်သောကောင်းမွန်သော၊ ကောင်းပြီးစျေးပေါသောစမတ်ဖုန်း Intex Aqua S9 Pro